Ahoana no hizahana toetra an'i Covid 19 any an-trano? - BALLYA
Posted on Febroary 25, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy 19 taona
Momba ny fitsapana haingana ny SARS-CoV-2 IgG / IgM
Momba ny fitsapana haingana an'ny SARS-CoV-2 Antigen
Karazana fitsapana 19 koba any an-trano
Ireo mpiorina amin'ny test covid 19 any an-trano
Ahoana ny fanangonana santionany amin'ny test covid 19 any an-trano?
Ahoana ny fomba hanaovana test covid 19 any an-trano?
Valin'ny fandikana ny fitsapana ao an-trano kova 19
Fitsarana ho an'ny fanandramana 19 any an-trano
Fitsapana iza no mety amin'izany ao an-trano fanandramana kova 19? Fampidirana fohy eto:
The Fitsapana haingana ny SARS-CoV-2 IgG / IgM dia immunoassay mivezivezy amin'ny lafiny nokasaina hamantarana ny kalitao ary koa ny fanavahana ireo antivirus IgM sy IgG ho SARS-CoV-2 amin'ny plasma olombelona avy amin'ny ra anticoagulated.
The Fitsapana haingana ny SARS-CoV-2 IgG / IgM dia natao hampiasaina ho fanampiana amin'ny famantarana ireo olona manana valiny miaro amin'ny fahasalamana amin'ny SARS-CoV-2, izay manondro aretina ankehitriny na teo aloha. Amin'izao fotoana izao, tsy fantatra ny hoe mandra-pahoviana ny antibiotika maharitra amin'ny areti-mifindra ary koa raha misy fiarovana ny hery fiarovana. Ny antibodioma IgM sy IgG an'ny SARS-CoV-2 dia mazàna hita amin'ny ra mandritra ny andro maromaro aorian'ny aretina mialoha, na dia tsy voafaritra tsara aza ny faharetan'ny fotoana misy ny antibodies.
Ny vokatra tsy mahasoa dia tsy manakana ny aretina mahery SARS-CoV-2. Raha eritreritra ny aretina lehibe dia ilaina ny fitsapana mivantana ny SARS-CoV-2.
Voka-dratsy diso ho an'ny Fitsapana haingana ny SARS-CoV-2 IgG / IgM dia mety hitranga noho ny fiovan'ny fiovan'ny sela avy amin'ny antibodies efa nisy na antony hafa mety hitranga. Vokatry ny fandrahonana ny valim-pifidianana diso, ny fanamafisana ny vokatra tsara dia mila eritreretina hampiasa ny andrana faha-2, IgG na IgM isan-karazany.
COVID-19 Fitsapana antigen dia ahitana antibodies monoclonal mifanohitra amin'ny SARS-CoV-2 / COVID-19 mifangaro amin'ny nanoparticle volamena, izay mifamatotra amin'ny karazana antigène SARS-CoV-2 misy ao amin'io ohatra io. Ny antibodiônôma monoklonal manohitra ny SARS-CoV-2 dia rakotra ao amin'ny faritra fizahana amin'ny sosona membrane NC, izay mifamatotra amin'ny toeran'ny antigen-antibody ary koa mamokatra tsipika miloko noho ny nanoparticle volamena. Ny faritra fanaraha-maso eo an-tampon'ny cassette dia manamarina raha tena nahomby ny fanadinana.
COVID-19 Fitsapana antigen dia fanandramana immunochromatographic ho an'ny fahitana antigène proteinina nukokokimidid nesorina manokana ho an'ny SARS-CoV-2 amin'ny santionany swab nangonina mivantana avy amin'ny olona izay heverina ho COVID-19 ataon'ireo mpanome fitsaboana azy ireo.
Ho an'ny fikarohana kalitao antigen SARS-CoV-2 avy amin'ny santionany swab nasopharyngeal.
Misy karazany roa ny ao an-trano fanandramana kova 19.
Fitsapana haingana an'ny antigen SARS-CoV-2
Vahaolana buffer ho an'ny fanandramana haingana ny covid 19 IgG / IgM
Kasety fitsapana haingana Covid 19 IgG / IgM
Kasety fitsapana antigen Covid 19
Vahaolana buffer ho an'ny fitsapana haingana ny antigen covid 19
ao an-trano fitsapana kova 19 - manangona santionany
The Fitsapana haingana an'ny antigen SARS-CoV-2 dia azo tanterahina amin'ny fampiasana santionany swab nasal.
Ny fitsapana dia tokony hatao avy hatrany aorian'ny fanangonana ny santionany, na farafaharatsiny ao anatin'ny adiny iray (1) aorian'ny fanangonana karazana, raha tehirizina amin'ny mari-pana (15-30 ° C).
Mba hanangonana santionany amin'ny savony:
manangona santionany - ao an-trano fanandramana kova 19
Ampidiro am-pitandremana Swab Disposable, omena miaraka amin'ny kitanao ao anaty nostri iray. Ampiasao ny fihodinana malefaka, atosiho hatramin'ny 2.5 sm (1 santimetatra) ny savony avy eo amin'ny sisin'ny vavorona.
Ahodina ny swab 5 heny amin'ny mucosa ao anaty vavorona mba hiantohana ny fanangonana santionany.
Ampiasao ilay savony iray ihany, avereno ity dingana ity amin'ny vavorona hafa mba hahazoana antoka fa misy santionany sahaza azo avy amin'ny lava orona.
Esory amin'ny fonon'ny orona ny swab. Ny santionany dia vonona amin'ny fanomanana amin'ny fampiasana fantsona buffer fitrandrahana.
manao covid 19 fitsapana ao an-trano
manao an-trano fanandramana kova 19 any an-trano
any an-trano valiny 19 valiny fandikana fitsapana
Fitsapana ny rora an'ny antigen SARS-CoV-2, COVID-19 IgG / IgM Fitsapana haingana